ရန်ကုန် ကား ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
အထူးသီးသန့်(32)
သဘာဝဓာတ်ငွေ့(3)
Sport ကား (9)
A/C: Front (2022)
A/C: Rear (997)
Airbag: Driver (52)
Airbag: Passenger (42)
Cassette Radio (1652)
CD Audio System (170)
Black Mercedes-Benz G55 AMG Turbo 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေ...
Pearl white Mercedes-Benz R 350 Bluetec 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...
Black Toyota Wish 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်း...
Silver Toyota Ractis 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl white Toyota Fielder 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Black Honda Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl white Suzuki Swift 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...
Pearl white Toyota Wish 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start.ေ...
ရန်ကုန်မြို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ မော်တော်ယာဉ် အရေ အတွက် အများဆုံး မြို့တော် အဖြစ်လည်း သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်တော့ မပါ ပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့တော် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင် ခွင့်ကို ပိတ်ထားတာမို့ ဆိုင်ကယ်ကို အခြား နယ်မြို့တွေမှာသာ အများဆုံး မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် မန္တလေးမြို့မှာ မြင်တွေ့ နိုင် ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကတော့် နေထိုင်သူများ အသုံးပြုတဲ့ ကားများ၊ လုပ်ငန်း သုံး ကားများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုတဲ့ ယန္တယား ယာဉ်များ အင်မတန် ပေါများ ပါတယ်။ တစ်မျိုးချင်းစီ ရှင်းရမယ် ဆိုရင် -
ရန်ကုန်မှာ ဆလွန်းကား အမျိုးအစား အရေအတွက် အများဆုံးလို့ မှတ်တမ်း တင်နိုင် ပါတယ်။ မြေပြန့် ဒေသလည်း ဖြစ် အခြား မြို့နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးများ ထက်လည်း လမ်းကောင်းတော့ ဆလွန်းကား က အိမ်သုံး အတွက်ကော၊ လုပ်ငန်းသုံး အတွက်ပါ ဝယ်ကြ ပါတယ်။ နေပြည်တော်က လမ်းပိုကောင်း ပေမယ့် လူဦးရေ နည်းတော့် ရန်ကုန်က ကား အရေအတွက်ကို မမှီ ပါဘူး။ ဆလွန်းကားမှာ အများဆုံး မြင်တွေ့ရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်က ဂျပန်ထုတ် တိုယိုတာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဂျာမနီထုတ်ကားများဖြစ်သည့် ဘီအမ်ဒဘလူ ၊ မာစီးဒီး နှင့်၊ အခြား ဥရောပနဲ့ အမေရိက မှ ကား အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အက်စ်ယူဗီ ကား လည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ အရေအတွက် များပါတယ်။ အဓိက အများဆုံး မြင်ရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်က တစ်ချိန်တုန်းက ဆိုရင် မစ်ဆူဘီရှီ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ပါဂျဲရိုးလို့ အမည်ရတဲ့ ကား ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ဈေးအကြီးဆုံး အက်စ်ယူဗီ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ယနေ့တော့ တိုယိုတာ ရဲ့ အမျိုးအစား များများနဲ့ ဝင်တဲ့ ဈေးသက်သာ၊ ဈေးကြီး အက်စ်ယူဗီများက အရေအတွက် ပိုများ လာပါပြီ။ အခြားသော အမှတ်တံဆိပ် များလည်း ဝင်ပါတယ်။
နောက်ဖုံး ဖွင့်ကား မှာတော့ လက်ရှိ နာမည်ကြီး လူသုံးများနေတာက တိုယိုတာ ဗစ် နဲ့ ဟွန်ဒါ ဖစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူဇူကီး ဆွစ်ဖ် ဈေးပိုကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ တိုယိုတာနဲ့ ဟွန်ဒါကို စွယ်စုံသုံးပေမယ့် ဆူဇူကီး ဆွစ်ဖ်ကိုကျတော့ အိမ်သုံး သီးသန့် သုံးကြ ပါတယ်။ နစ်ဆန်း ကလည်း နောက်ဖုံးဖွင့်ကားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါ တွေက အရွယ်သေးတဲ့ နောက်ဖုံးဖွင့် ကားတွေပါ။ အရွယ်ကြီး နောက်ဖုံးဖွင့် အခြားကားများလည်း ရှိပါ သေးတယ်။
ဗန် အမျိုးအစား ကား များလည်း ရန်ကုန်မှာ အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဗန်က တစ်ချိန်က အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင်လည်း များနေပါသေး တယ်။ ယနေ့ခေတ် ဝင်တဲ့ အထဲမှာလည်း ဗန်တွေ အများကြီးပါ။ ဂျပန်၊ ဥရောပ၊ အမေရိက ဘရန်း စုံ ပါတယ်။
ရန်ကုန်ကိုလည်း ပြိုင်ကား ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားတဲ့ မြို့တော် အဖြစ်လည်း သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ တရားဝင် မဟုတ်ပေမယ့် လူငယ်အချင်းချင်း အုပ်စုဖွဲ့လို့ ပြုလုပ်ကြတဲ့ ပြိုင်ကား မောင်း ပြိုင်ပွဲ တွေ ရှိပါတယ်။ တရားဝင် စုဖွဲ့ ထားတဲ့ ပြိုင်ကား အဖွဲ့ / ဂိုဏ်းများလည်း ယနေ့မှာ ခေတ်စား လာပါတယ်။ ကား ကတော့ အစုံပါပဲ။ အများစု ကတော့ နစ်ဆန်း ဖဲလေဒီ၊ တိုယိုတာ ဂျီတီ နဲ့ မာဇဒါ အာအိတ် ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော နိုင်ငံများက အမှတ်တံဆိပ် အစုံ ကားများလည်း ဝင်ပါ သေးတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးမြင့် နေပါတယ်။ စက်မှုဇုန်များလည်း တစ်ခုပြီး တစ်ခု တည်ဆောက်လျက် ရှိပြီး ရှိရင်းဆွဲ စက်မှုဇုန် များကလည်း မော်တော် အမျိုးမျိုး လိုအပ် နေပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်၊ ဆိပ်ကမ်းသုံး ယာဉ် အပြင် အခြားသော ယာဉ်အမျိုးမျိုး လိုအပ်ချက်က ကြီးပါတယ်။ အများပြည်သူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း အတွက်လည်း အတော်လေး သုံးကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကတော့ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ် တို့က အများစု ဝင်ရောက်ပြီး ဥရောပ ဘက်က ယာဉ်များလည်း ရောက် ရှိပါတယ်။ အဟောင်းတွေလည်း ဝယ်သုံး သလို၊ အသစ်တွေလည်း အော်ဒါမှာ ဝယ်ကြ ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဂျပန် အပြင် အခြားသော နိုင်ငံ အများအပြားကနေ တင်သွင်း အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ် ကတော့ ရန်ကုန်ရဲ့ မြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာသာ မရပေမယ့် အခြားမြို့နယ် တွေမှာ မောင်းနှင်ကြ ပါတယ်။ အင်းစိန်၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ဘောက်ထော်၊ သန်လျင်၊ တောင်နဲ့ မြောက် ဥက္ကာလာပ အပြင် အခြားသော မြို့နယ်များရဲ့ ကန့်သတ် လမ်းတွေမှာ အသုံးပြု နိုင် ပါတယ်။
အထက်ပါ ရှင်းပြမှု မှာ ပါဝင် မလာတဲ့ အခြား ယာဉ်အမျိုးအစား များစွာ ရှိပါသေးတယ်။ လူဦးရေ ၆ သန်း ရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ လူသုံး ယာဉ်၊ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်၊ ဆိပ်ကမ်းမှာ အခွန်မဆောင်လို့ မထုတ်ရသေးတဲ့ ယာဉ် အစရှိသဖြင့် စာရင်းကောက် လိုက်ရင် ၁ သန်း ဝန်းကျင် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားကြ ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ အများစုက တစ်ပတ်ရစ် ယာဉ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အသစ်တွေ လည်း ဒီနောက် ပိုင်း အတော်လေး ဝင်လာတာကြောင့် ၅ နှစ်အတွင်း အသစ်တွေ အရေအတွက် ပိုများလာမယ့် လို့ ခန့်မှန်းထားကြ ပါတယ်။ ဂျပန် လေလံဈေး ကနေ အများအားဖြင့် တစ်ပတ်ရစ် မှာယူ ကြပြီး အသစ်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ ကုမ္မဏီများကနေ အများစု ကဝယ်နေပါတယ်။ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် မှာယူ တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ motors.com.mm ကနေလည်း ရန်ကုန် မြို့အတွင်းက ရရှိ နိုင်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ် နဲ့ ယာဉ် အသစ်များ ကို စိတ်ကြိုက်လေ့လာ ရှာဖွေ စုံစမ်း ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။